ဘန်ကောက်မြို့ HGH ဆေးဝါး - ငွေပေးချေမှု Western Union အဘို့ကိုလက်မခံ
HGH ထိုင်းနိုင်ငံက ဇန်နဝါရီလ 22, 2018
Western Union နိုင်ငံတကာငွေလွှဲပြောင်းလုပ်ဘယ်လိုနေသလဲ?
ငွေလွှဲစနစ်က Western Union ။ သင်သည်မည်သည့်အတွက်ပိုက်ဆံလွှဲပြောင်းနိုင်
သင့်ရဲ့တိုင်းပြည်အတွက်, oတရားဝင် site ပေါ်တွင် link ကိုအားဖြင့် ffice ရှာဖွေရေး
အဆိုပါ Western Union လွှဲပြောင်းလုံခြုံမှုအရှိဆုံးစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်, သငျသညျကိုသုံးနိုင်သည်
အွန်လိုင်း mode ကိုသင့်ရဲ့တဝက်-လမ်းလွှဲပြောင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုခြေရာခံရန်
HGH ထုတ်ကုန်များအတွက် Western Union အားဖြင့်ဆပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ကြှနျုပျတို့၏ website တခုတခုအပေါ်မှာအမိန့်အားမရခြင်းနှင့်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုရွေးချယ်ရာတွင်ပြီးနောက်
"Western Union" သင်နှင့်အတူသင့်အီးမေးလ်အပေါ်သတင်းအချက်အလက်ကိုလက်ခံရရှိပါလိမ့်မယ်
သငျသညျလက်ခံရရှိသောဒေတာတွေနဲ့ Next ကို, သင်အနီးဆုံးရုံးကိုသွားသင့်တယ်
တစ်ဦးကငွေလွှဲပြောင်းဘို့။ အဆိုပါငွေပေးငွေယူသည့်လုပ်ငန်းစဉ် 15 ထက်မပိုကြာ
အတည်ပြုခဲ့သည်ငွေပေးချေပြီးနောက်, သင့်အမိန့် 12 နာရီအတွင်းလှေတျတျောမူပါလိမ့်မည် (ဖြန့်ဝေအကြောင်းပိုမိုဖတ်ပါ)
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များအတွက်ငွေပေးချေမှုနှင့်ဖြန့်ဝေ၏ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းများ၏စောင့်ရှောက်မှုကို ယူ. ,